Anokwenenzverwa matafura ekofi - Tsvaga ese ayo makuru akanaka | Bezzia
Susana godoy | 21/04/2021 16:00 | Musha
Unoziva here simudza-kumusoro tafura dzekofi? Chokwadi unodaro, asi pamwe hauzive zvese zvakanakira zvavanazvo uye nei tichifanirawo kuva nazvo mumba yekutandarira. Nekuti mukati mekushongedzwa kwemba tichagara tichiwana mazano akakwana kune yega dhizaini uye yeimba yega yega.
Asi ichokwadi kuti mukati mekushongedza imba yekutandarira, pane midziyo yakati wandei inofanirwa kunge iripo. Imwe yadzo ndiyo tafura yekofi iyo inowedzera mamwe mavambo uye navo kushongedzwa kwakagadzirwa kwakapedzwa. Kunze kwekunge nzvimbo ichikutadzisa iwe, zvakanaka kuvasarudzira. Tsvaga zvese zvavachatiitira!
1 Svutugadzike uye zvekudya zvisina kufanira vasina kusiya pasofa
2 Une vana here? Ipapo ivo vanozove vanonyanya kushanda kune vadiki
3 Yakawanda nzvimbo yezvidiki diki
4 Sevha zvaunoda zuva rega rega
5 Anokwidziridzwa matafura ekofi: fenicha inoshanda panowanikwa iwo
Svutugadzike uye zvekudya zvisina kufanira vasina kusiya pasofa
Kusununguka kwatakaita pasofa hatisi mune imwe nzvimbo. Naizvozvo, hapana chakafanana nekutora mukana wenguva yekuve mairi, asi kunatsiridza tudyo kana kudya kwemanheru. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kusimudza tafura yekofi uye totanga kunakidzwa nekudyiwa kwakasiyana siyana. Isu tinodzivirira kushatisa pasofa nechikafu uye zvakare iri nzira inopokana yekuve nezvose zviripo tisingatyi kudurura chero mvura pamusoro pedu. Sezvo ivo vachizotsigira uremu hwese hwekudya kwedu uye zvese zvishongedzo zvinoumba. Chii chinonzwika zvese zvakanaka?
Une vana here? Ipapo ivo vanozove vanonyanya kushanda kune vadiki
Pese patinovaona vaine mapepa nemavara akananga pasofa, tinokanda maoko edu kumusoro. Naizvozvo, simba kuva nematafura ekofi anosimudzwa inogara iri imwe nzira yakanaka. Nekuti kana tichizodya masikati kana kudya kwemanheru, hongu tinogona kuvashandisa setafura yerudzi tafura. Nekudaro, isu tese tinogona kuve tese tisina kubuda mumba uye panguva imwechete, tese takavaraidzwa. Iwo madiki anozove neayo inomira pamusoro kuti arege kugona kwavo kubhururuka.
Yakawanda nzvimbo yezvidiki diki
Ichokwadi kuti pano zvinoenderana nerudzi rwetafura iri kutaurwa. Asi mamwe acho ane nzvimbo yemukati iyo inogona kungoonekwa kana ivo vachisimuka chaizvo. Izvi zvinoreva kuti zvese zvichaunganidzwa uye nekudaro, kuti magazini mazhinji, mapepa kana chero chinhu chatinoda kuchengeta hachionekwe. Ehezve, iri zano rakakura sekuwedzera chekuchengetedza, kunyanya kana pasi iri diki uye isu tichiida hongu kana hongu. Kunyangwe kana isu tichifunga nezvazvo, kunyangwe mumakamuri mahombe, nzvimbo kumagumo inogara ichidikanwa. Iye zvino uchave nazvo kuti ugone kuchengeta izvo zvaunoda mukati.
Sevha zvaunoda zuva rega rega
Takazvitaura uye ndezvekuti idzi nzvimbo dzinogara dzakatinakira. Asi kana pachinzvimbo chekuchengetedza zvimwe zvinhu, Iwe unofungei kana tikachengeta izvo zvinonyanya kukosha? Inogona kunge iri bhodhoro kana zvidyiwa zvekutarisa patinenge tichiona vatinofarira nhevedzano uye nekudaro, tisingafanire kuenda kukicheni kazhinji. Kune rimwe divi, unogona kusevha majaja emidziyo uye aya, kana iwe usingaashandise sezvazvinoitika nemapiritsi.
Anokwidziridzwa matafura ekofi: fenicha inoshanda panowanikwa iwo
Kana tichishongedza imba yedu tinogara tichifunga nezve inoshanda fenicha. Nekuti ndizvo chaizvo zvatinoda. Zvese izvo zvinoita kuti tinzwe kugadzikana uye izvo panguva imwechete, chengetedza akasiyana mabasa. Mune ino kesi ine zvese izvi uye nezvimwe. Nekuti ivo vanowedzera yakakura sitaira asi panguva imwechete, ivo zvakare vakakwana sekuchengetedza uye vanopa nyaradzo sezvataona. Zvese zvaunoda kuti ubudirire, zvisinei kuti unotarisa kupi. Ese mashopu emidziyo iwe aunoziva achave nemamodeli ekusimudza matafura ekofi. Unotova neyako here?
Mifananidzo: Conforama, Ikea
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Anosimudzwa matafura ekofi
9 maruva madhirezi e nyika kutiza